Madal Go'aaminta Waqtiga-Rasmiga ah ee Bluecore ee eTail | Martech Zone
Madal Go'aaminta Waqtiga-Rasmiga ah ee Bluecore ee eTail
Axad, Juun 9, 2017 Talaado, Agoosto 18, 2020 Douglas Karr
Adigu waxaad tahay suuqleyda. Maxaad sameyn doontaa marka xigta Tani waa su’aal ay suuqleydu isweydiiyaan si joogto ah. Xogta hadda waxay ku qulquleysaa ururada xawaaraha iyo mugga rikoorka, iyo habeynta abaabulka iyo ku shaqeynta xogtaan ayaa curyaamin karta.
Bilaabayaasha, waxaa lagugu xil saaray inaad ogaato waxyaabo kala duwan oo ku saabsan macaamiishaada:
Waa kuwee macaamiishayda ugu qiimaha badan?
Waa kuwee macaamiishaydu kuwa kaliya iibsada waxyaabaha dhimista ah?
Macaamiilkee ayaan luminayaa?
… Liiskuna wuu socdaa.
Haddii aad isu geyn karto xogta badan ee kanaalka badan oo aad macno u yeelan karto yaa ku jira saldhiggaaga macmiilka, maxaad ku xigi doontaa macluumaadkaas? Micnaha, sidee ugu dhaqantaa? Kani waa qorshahaaga warbaahineed: Yaad bartilmaameed ka dhiganeysaa, kanaalkee ayaad ku gaarsiin kartaa farriimahaas goormaadse wax qabanaysaa? Qoto dheer ee aqoonta, aragtida, iyo kartida ayaa ah mid aysan gaarin inta badan suuqleyda.
Iyada oo laga jawaabayo caqabadan warshadeed, Bluecore, oo ah afar jir bixiya tikniyoolajiyadda SaaS, ayaa ku dhawaaqay aaladda cusub ee 'Decisioning Platform' ee tafaariiqleyda si ay uga caawiso ka jawaabidda su'aasha ah "maxaa xigi doona?" Iskuxidhkeeda keli keli ahi wuxuu awood u siinayaa suuqleyda tafaariiqleyda inay maareeyaan xogta isla markaana ay u abuuraan dhagaystayaasha kanaallada oo dhan, iyadoon ku lug lahayn IT-ga.
Waxaan ku nool nahay adduunyo raaxo deg deg ah oo suuqleydu aysan haysan waqti raaxada. Xawaaraha iyo garashada waqtiga-dhabta ah ayaa ah furayaasha wadista soo iibsiga, beddelka iyo cabbiraadaha cabbiraadda ee maanta tafaariiqda tartanka. CRM iyo Analytics aaladuhu waxay siiyaan dukaamada tafaariiqda awooda uruurinta macluumaadka ujeedadan, laakiin kaliya uruurinta xogta ma wado natiijooyinka.
Ganacsatada tafaariiqda uma baahna xog dheeri ah ama qalab cusub oo lagu xoojiyo xogta. Waxay ubaahanyihiin caawimaad sifeynta qaababka xogtooda waxayna ubaahanyihiin aalado go'aan qaadasho si loogu shaqaaleeyo xogtaas. Ku dhiirrigeli kooxahaaga inay ku shaqeeyaan waxa ay ka og yihiin macaamiishaada si aad u abuuri karto khibrado dhab ah oo macno leh xilliyada ku habboon safarka wax iibsiga.
Suuqleydu uma baahna xog dheeri ah. Waxay ubaahan yihiin caawimaad isticmaalkeeda - taasi waa qaybta ka maqan suuqa maanta. Waxaan u qaabeynay barxadeena inay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaan xirmooyinka suuq-geynta ee hadda jira, iyadoo aan caawimaad laga helin kooxaha IT-ga, iyo isdhexgalka adeegsade fudud si suuqleydu ay u dhisi karaan una dhejin karaan dhagaystayaasha marinnada dhexdooda ilbiriqsiyo gudahood. Fayez Mohamood, oo ah aasaasaha, iyo agaasimaha guud ee Bluecore
Maaddaama ay tahay unugyada isku xidhka ah ee ku jira xayeysiintaada suuqgeynta, Go'aanka Go'aan qaadashada ee Bluecore wuxuu si dhib la'aan isugu xiraa ilaha xogta, sida CRM, buugga wax soo saarka iyo barxadda eCommerce, oo leh teknolojiyada kanaalka ee toos ula xiriira macaamiishaada. Marka sidaas la samaynayo, barnaamijku wuxuu socodsiiyaa xog ballaaran oo ilbiriqsiyo ah, taas oo ka dhigaysa isla markiiba waxqabad loogu talagalay suuqleyda si ay u dhisaan dhagaystayaal, oo ay ku jiri karaan macaamiishaada ugu qiimaha badan, kuwa wax ka dhimay, macaamiisha qarka u saaran inay hungoobaan. Suuqleyda ayaa markaa ololeyn ka dhex marin kara kanaallada sida emaylka, bulshada, raadinta iyo goobta.
Soo hel Shaqo Madal Go'aaminta Bluecore
Aynu tusaale qaas ah ka soo qaadanno kabaha isboortiga adduunka iyo tafaariiqle dharka:
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah naqshadeeyayaasha adduunka ugu sarreeya, suuqleyda iyo qeybiyeyaasha jirdhiska iyo kabaha qaab nololeedka, dharka iyo qalabka, sumaddan caalamiga ah ayaa muddo dheer caan ku ahayd hoggaaminta isbeddellada dhijitaalka ah waxayna u soo bandhigeysaa dhagaystayaasheeda runtii waaya-aragnimo ku lug leh - dukaanka iyo khadka tooska ah. Laakiin sida ay tahay tafaariiqleyda intarnetka badankood, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda ururada waaweyn ee leh kaabayaasha adag, helitaanka iyo wax ka qabashada si dhakhso leh xogta macaamiisha ayaa cadeeyay inay caqabad ku tahay shirkadda.
Si looga gudbo caqabadan, tafaariiqle wuxuu u jeestay Bluecore inuu:
Falanqee oo go'aaminta heerarka macaamilka macaamil iyadoo la adeegsanayo xogta macaamiisha waqtiga-dhabta ah
U dir e-mayl si aad ah shakhsiyadeed kiciyay, waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada, xayeysiis bandhig iyo khibradaha goobta
Soo bandhig fikradaha macaamilka ee waxqabadka leh oo soosaara dhagaystayaal takhasus u leh tafaariiqda ilbiriqsiyo ku saleysan xogta taariikhiga ah iyo algorithms-ka la saadaalinayo
Si dhakhso leh isugu dheji dhagaystayaasha emailka, kanaalada iyo kanaalada si ay u socodsiiyaan ololeyaal suuq geyn ah oo iskuxidh badan iyada oo aan hawsha loo dirin waaxda IT-ga.
Kahor Bluecore, maanaan helin marin ku filan oo ku saabsan xogta macaamiisheena. Ma awoodin inaan si fudud wax uga qabano ama aan uga soo qaadno tallaabooyin. Waxaan ogaannay in Bluecore uusan naga caawin karin oo keliya xallinta dhibaatadan, laakiin waa la xallin karaa iyada oo aan culeys la saarin waaxdeena caalamiga ah ee IT-da. Tani waxay noo ahayd goob iib weyn, annaga oo Bluecore adeegsigiisa dabacsan oo si fudud loo isticmaali karo wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku ilaalino ololeheena suuqgeynta meeshii ay ahayd - waaxda suuqgeynta, oo aan ku jirin gacanta waaxda IT-ga. Inaad awood u yeelatid inaad dib ula soo noqotid xakamaynta ololeheena suuq-geynta ayaa aad u weyneyd. Maanaan arag madal sidan u fududahay in la isticmaalo ama dhakhso loogu hirgeliyo aalad kale illaa hadda. Tafaariiqle Maamulaha Sare ee CRM
Tafaariiqleyda ayaa hadda isticmaalaya Madal Go'aaminta Bluecore si dhakhso leh loo falanqeeyo loona dhexgalo xogta, loo abuuro dhagaystayaal ilbiriqsiyo iyo in la hirgeliyo ololeyaal iskutallaab ah oo lagu wareejiyo soosaarka cusub. Gaar ahaan, astaanta ayaa ka faa'iideysatay seddex kiis oo isticmaalka aasaasiga ah:
Kordhinta Xakamaynta Suuqgeynta iyo Helitaanka Xogta
Kahor hirgelinta Bluecore, abuurista ololeyaasha emaylku waxay u baahdeen caawimaad waaxda IT-ga ee shirkadda waxayna qaadan kartaa meel kasta 40 illaa 60 maalmood in la bilaabo. Hase yeeshee, Bluecore, si kastaba ha noqotee, kooxda suuqgeyntu waxay tijaabin kartaa oo ay hirgelin kartaa ka tagitaan bartilmaameed ah iyo nolol-kicinta ololeynta emaylka maalmo.
Marka lagu daro caawinta kahortaga waqti luminta iyo iskudhafka IT-ga, Bluecore wuxuu sidoo kale ufududeeyey tafaariiqleyda inuu dhexgalo ololahan la-hawlgalayaasha kale ee tikniyoolajiyadda. Tusaale ahaan, kooxda suuqgeyntu waxay qaadi karaan olole lagu bartilmaameedsanayo dadka qiimaha leh ee wax ka iibsanaya magaalooyinka muhiimka ah (tusaale ahaan Boston, New York City, Los Angeles) waxayna ku dhex dari karaan xogta barnaamijka loo yaqaan 'Handstand Fitness App' si ay ugu soo bandhigaan dadka wax ka iibsanayaa meelahaas juqraafiyeed tababar shaqsiyeed oo bilaash ah. .
Natiijooyinka ugu muhiimsan ee dadaalladan waxaa ka mid ahaa:
Awoodda lagu aqoonsado macaamiil dheeri ah goobta isla markaana la bilaabo ololeyaal dib-u-eegis dheeraad ah oo lala yeesho Bluecore marka la barbar dhigo tafaariiqleyda barnaamijkiisii ​​hore, SaleCycle
Qiimaha furan oo guji ee ka sareeya Bluecore marka loo eego SaleCycle, ugu dambayntiina horseedaya dib u soo laabashada maalgashiga 10: 1
Hagaajinta Xayeysiinta Summada Omnichannel
Markay tafaariiqdu aqoonsatay baahida loo qabo in la abaabulo isgaarsiin isdabajoog ah oo ku saabsan kanaallada oo dhan, waxay u jeesatay Bluecore si ay uga caawiso. Astaantu waxay ku bilaabatay dadaalkeedii dhiirrigelinta omnichannel iyada oo la bilaabay kabo cusub oo ku yaal khad caan ah oo caan ah. Si loo bilaabo, shirkadu waxay isticmaashay Bluecore's Platforming Platform si ay u dhisto dhagaystayaasha waqtiga dhabta ah ee macaamiisha leh xiriir sare si ay uga iibsadaan alaabada kabaha kabaha. Kadib waxay u dhiibtay khibrad shaqsiyadeed, goob joog ah dhagaystayaashan iyadoo la adeegsanayo Bluecore inay si habsami leh ugala shaqeyso aaladaha shakhsiyadeed ee goobta isla markaana lagu hagaajiyo bogga hal-abuurka duulimaadka si loo muujiyo kabaha cusub iyo alaabooyinka kale ee isla khadka ka soo baxay. Shirkadda ayaa sidoo kale qaadatay dadaalkan iyada oo u adeegaysa hanti isku mid ah oo ku dhex jirta xayeysiinta Facebook iyo iyada oo loo marayo ololeyaal suuqgeyn email ah kuwa wax iibsanaya oo leh xiriir sare oo ay ku iibsadaan sida lagu aqoonsaday Bluecore.
Si loo kordhiyo nolosha howlaha bilowga ololaha isla markaana looga dhigo waxyaabaha cusub macmiisha qiimaha sare leh, kooxda ayaa sidoo kale soo bandhigtay dhiirigelin gaar ah oo loogu talagalay soo booqdayaasha soo noqnoqda iyo macaamiisha hela farriinta taabashada labaad ee bixisa gelitaanka bilaashka ah mid ka mid ah dhacdooyinka adduunka ugu weyn ee shirkadda.
76% kor u qaadida qasabadaha macluumaadka shakhsi ahaaneed
Kordhinta beddelaadda in ka badan 30% ka tagista gaadhiga ee ololayaasha oo ay ku jiraan dhiirigelinta dheeraadka ah ee gelitaanka dhacdada bilaashka ah
Aqoonsiga dhagaystayaasha cusub si loo bartilmaameedsado marinnada
Bluecore waxay sidoo kale gacan ka geysatay tafaariiqda iyada oo la adeegsanayo dadaal ay ku kobcinayso dhagaystayaasheeda kanaallo cusub iyada oo waddo olole bulsheed oo ku xidhan soo saarista badeecad buunbuunin cusub. Adeegsiga barnaamijka 'Decisioning Platform' ee waqtiga dhabta ah ee Bluecore, shirkaddu waxay dhistay dhagaystayaal dukaameeysato ah oo daawaday alaabta cusub 60-kii maalmood ee la soo dhaafay laakiin ma aysan iibsan oo bartilmaameedsan iyaga xayeysiiska Facebook.
Guud ahaan, Platform Goinging Bluecore wuxuu ka caawiyay kooxda suuq geynta tafaariiqleyntan inay gacanta ku dhigaan xogta macmiilka, ka dhigaan xogtaas mid ficil ah oo ay ugu adeegsadaan si caqli ah, qaab shaqsiyeed si loo wanaajiyo waxqabadka kanaallada oo dhan. Tan iyo markii uu la shaqeynayay Bluecore, tafaariiqle wuxuu bartay in gaarista natiijooyinkan aysan ku saabsanayn in buuraha xogta macaamiisha la galiyo hal meel. Taabadalkeed, waxay ku saabsan tahay keenista geedi socodka go'aan qaadashada ee waxa laga yeelayo dhammaan fikradahaas hal madal.
Iyadoo la adeegsanayo Aragtida Dhagaystayaasha, suuqgeeyayaasha 'eCommerce' waxay marin u helayaan dashboorka ugu dhaqsaha badan uguna qoto dheer ee aragtida habdhaqanka- iyo aragtida ku saleysan wax soo saarka ee qeybta dhageystayaasha ay doortaan inay abuuraan. Mar haddii suuqyadu abuuraan dhagaystayaal ku dhex jira Bluecore, waxay hadda marin u heli karaan aragtida dhagaystayaasha si ay u indha indheeyaan sida qayb gaar ah loo saadaalinayo inay ku lug yeelato oo ay beddesho, ka dibna ay u horumariso ololeyaal iyo istiraatiijiyad si loo kordhiyo natiijooyinka.
Marka la eego Aragtida Dhageysiga, hoggaamiyeyaasha suuq-geynta waxay baran karaan sida qeybahooda ugu qiimaha badan macaamiishooda ay u fulinayaan marka loo eego kooxaha kale ee macaamiisha, iyo sida ololahoodu ula jaan qaadayaan dhagaystayaashaas. Suuqyayaashu waxay falanqeyn karaan toddobaadkan xogtan usbuuc ka badan waxayna qorsheynayaan xeelado suuq geyn ka dhan ah qeybaha gaarka ah ee macaamiishooda.
Dashboardka Aragtida Dhagaystayaasha ayaa ka jawaabaya su'aalaha sida:
Waa maxay qiimaha dhagaystayaashani? Eeg boqolkiiba dakhliga guud, celceliska qiimaha dalabka (AOV), celceliska tirada alaabada halkii amar, celceliska qiimaha nolosha oo dhan iyo celceliska qiimaha nolosha
Waa maxay caafimaadka dhagaystayaashani? Burburinta macaamiisha lumay, firfircoon iyo halista
Xagee kala xiriiri karaa dhagaystayaashan? Faahfaahin ku saabsan inta macaamiil ee dhagaystayaal gaar ah lagu gaari karo kanaalka la siinayo, sida emaylka, bulshada, muujinta ama goobta
Sidee dhagaystayaashu ugu mashquulsan yihiin alaabooyinka? Bandhigyada alaabada "Rockstars," "Cows Cash" iyo "Gems Hidden"
Sidee dhagaystayaashani ula macaamilayaan boggeyga? Si fudud u fahmaan isbeddellada dhacdooyinka, masraxa beddelaadda goobta iyo isbarbardhigga dhacdooyinka goobta
Sidee dhagaystayaashu ugu mashquulsan yihiin emaylkayga? Aragti faahfaahsan oo ku saabsan dirista, furan, iyo riix emayllada, iyo sidoo kale dib-u-qorista oo ku saleysan qaybaha dhagaystayaasha shaqsiyeed
Waa kuwee macaamiisha ugu xiisaha badan? Muuqaal qarsoodi ah oo ku saabsan macaamiisha shaqsiyadeed ee ay burburiyeen "kuwa ugu sarreeya," "daalacayaasha ugu sarreeya" iyo "kartida ugu sareysa"
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Aragtida Dhagaystayaasha
Tags: aragtida dhagaystayaashabluecorego'aan qaadashadawaqtiga dhabta ah
WordPress: Ku dul qor cinwaanka gaaban ee Waalidka Mawduuca Ilmahaaga